Abaalmarinta Caddaaladda - Argagixisnimo Loo Raadinayo - Sirajuddin Haqqani
Sirajuddin Haqqani iminka wuxuu hoggaamiyaa howl maalmeedka Shabakada Haqqani Network. Inta lagu jirey wareysigii uu siiyay ururada warbaahinta Mareykanka, Sirajuddin wuxuu qirtay inuu qorsheynayay weerarkii 14 bisha Janaayo, 2008 ee lagu qaaday Hoteelka Serena Hotel ee Kabul ku yaalay oo lix qof lagu dilay, oo uu ku jiro muwaadin Mareykan ah oo lagu magaabi jiray Thor David Hesla.
Sidoo kale Sirajuddin wuxuu qirtay inuu qorsheeyay isku daygii shirqoolka ee la damacsanaa Madaxwaynaha Afghan Xamiid Karzai. Wuxuu isku soo dabariday oo uu ka qeybqaatay weeraro xuduuda oo lagu qaaday ciidamada Mareykanka iyo Xoogga Isbaheysiga ee Afghanistan jooga. Waxaa la aaminsan yahay inuu joogo Meelaha Qabaa’ilka ee Dowladda Dhexe ee Pakistan ay Maamusho.
Waaxda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka waxay Sirajuddin Haqqani u magacawday inuu yahay Argaggixiso Gaar ah oo Caalami ah sida hoos timaada Amarka Go’aal meel-marinta ee 13224 ee soo baxay bishii Maarso 2008.
Taariikhda Dhalashada: Qiyaas 1973
Dhererka: 5’ 7” (170 cm)
Miisaanka: 150 lbs (68 kg)
Midabka: Iftiimayo, calyuun leh
Dhalashada: Afghan Pashtun
Magacyada La Sheegto: Sirajuddun Haqaani